Zisola dengwane izintandane ziphucwa indlu | News24
Zisola dengwane izintandane ziphucwa indlu
PHOTO:NOMPENDULO NGUBANE Indlu yaseFrance, eMpumelelo esisuse umbango lapho umnikazi wayo ekhipha kuyo izintandane ezihlala kuyona ngoba eseyidinga. Esithombeni uKhotso Ndlovu omi nabashana bakhe nabo abahlala kulendlu, uBonhle noDinhle Ndlovu.
UKUDAYISWA kwezindlu zomxhaso eminyakeni eyevile eshumini edlule sekuholele ukuthi izintandane ezine zase zaseMpumelelo eFrance zisale zingenakhaya.
Ukusala dengwane kwalezi zintandane kulandela emva kokuba owesifazane okunguyena ongumnikazi wendlu esetshele lezi zintandane ukuthi ziphume ziphele kule ndlu ngoba useyayidinga. Ngokuchaza kuka Khotsho Ndlovu (25) okunguyena omdala kulezi zintandane uthe baqale ukuhlala kulo muzi ngonyaka ka-2004 futhi betshelwe umama wabo uNksz Elizabeth Mafisa ukuthi umuzi wawuthenga ekomitini elidala okwabe kuyilona elabe likhona ngaleso sikhathi.
Uthe kuyena kufike kuyinto entsha ukuthi umuzi ungoka Nksz Phindile Ndabezitha nokunguye osefuna umuzi wakhe ukuthi ubuyele kuyena ngoba ekhala ngesimo sendawo ahlala kuyo eMbali Unit 2 lapho athi uqashe khona egalaji. UNdlovu uthe kumanje bazoba ngondingasithebeni ngoba uNdabezitha ethe ubanikeza izinyanga ezintathu kuphela ukuthi baphume endlini yakhe. UNdabezitha unawo amaphepha awathola kuMnyango weZindlu ashoyo ukuthi umuzi ungowakhe. UNdlovu yena ebuzwa ngamaphepha uthe umama wabo akazange abashiyele amaphepha ngaphambi kokuba ashone ngo-2009. Umama kaNdlovu ushone emva kokugula kanti ushiye yena uNdlovu nodadewabo abathathu nabashana ababili.
Abahlala kule ndlu uPalesa (21), Ntswaki (18), Makatso (15), Bonhle noDinhle.
Ikhansela lika wadi 18 uNksz Philisiwe Gwala echaza ngalesi simo uthe kunezigameko eziningi asehlangane nazo ewadini yakhe lapho abantu basuke bedayiselene izindlu kodwa bese kuba nezinkinga ekugcineni. Uthe yena nekomiti baye bangangeni lapho kusuke kudayiselwene khona kodwa baye baluleke labo ababili abasuke bedayiselene ukuthi bayixazulule bona inkinga kodwa bafake nommeli phakathi.
“Kuba nzima ukungenelela udaba lapho abantu besuke bedayiselene indlu. Ukudayisa indlu yomxhaso akuvumelekile futhi akukho emthethweni. Okunye bekungaba kuhle ukube abantwana bezile bazobika inkinga ekomitini ukuze kubonakale ukuthi bangasizakala kanjani. Ngeke ngize ngaqinisekisa ukuthi bazosizakala ngoba kumanje ayikho indawo ekhona lapho singabathatha sibahlalise khona,” kusho uGwala.
UNdabezitha yena uthe uMafisa wayazi ukuthi indlu ngeyakhe ngoba bake bahlangana bakhuluma ngaphambi kokuthi ashone.
“Ngamazisa ukuthi yimina umnikazi wendlu kodwa ngase ngibanika isikhathi sokuthi indlu bangayisebenzisa. Emva kokushona kwakhe ngabacabangela abantwana ngathi: abahlale kodwa nami manje indlu yami ngiyayidinga ibuyele kumina.
“Lapho engihlala khona ngiqashile kanti futhi ngihlala egalaji elingekho esimeni esihle,” kusho uNdabezitha.
UNdlovu uthe kuyacaca ukuthi bazosala bengenayo indlu kodwa wabe esecela usizo kunoma ubani ongabasiza ngendawo yokuhlala. “Emva kokuphelelwa umsebenzi yonke into ibheke mina ukuthi ngiyilungise. Izingane zasekhaya zibheke mina njengomuntu omdala. Sicela usizo noma ubani ongasisiza ukuthi asilekelele sithole indawo yokufihla ikhanda,” kuzikhalela yena.
Abangafisa ukusiza bangashayela uNdlovu ku-078 524 8120